4u PRO - ပြန်ကြားရေး site ကို
သတင်းအချက်အလက် site ကို
Horoscope, မှော်, Divinity
အပန်းဖြေ, Entertainment က
ချိန်းတွေ့, မတ်ေတာ, ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ themes များ
Shawarma - အိမ်မှာမုန်များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းချက်ပြုတ်နည်းများ
22.12.2018 မှတ်ချက် Leave
Shawarma - အိမ်မှာမုန်များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းချက်ပြုတ်နည်းများအလွန်ရေပန်းစားယနေ့တိုင်သုံးပြီးဟင်းလျာများအများကြီးချက်ပြုတ်အရှေ့ဥရောပကိုပေး၏။ kebabs - အသက်အကြီးဆုံးဟင်းလျာများ၏ပြင်ဆင်မှု၏နည်းပညာကနေပျေါထှနျးခဲ့သည့်တစ်ဦးစာရွက် - ဤလက်ဆောင်တွေတ shawarma ဖြစ်ခဲ့သည်။ အတူထူးအိမ်သင် pita ...
22.12.2018 1 မှတ်ချက်
ဂျပန်တွင်နှစ်သစ်ကူးအစဉ်အလာဂျပန်ဂျပန်အတွက်နှစ်သစ်ကူး၏အစဉ်အလာကဒီမှာ, အစဉ်အလာတစ်ခုများစွာသောလူသိများနှင့်နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်သူတို့မရှိဘဲမဟုတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျဂျပန်အတွက်နှစ်သစ်ကူး၏အစဉ်အလာကိုယခင်ကတည်ရှိခြင်းနှင့်ယခုရှိသောအရာကိုသိရန်လိုပါသလော ထို့နောက်အပေါ်ကိုဖတ်ပါ။ ဂုဏ်ပြုအစဉ်အလာ ...
အေးမုန်နှစ်သစ်ကူးရဲ့ table ထဲမှာအမြဲဆိုအားလပ်ရက် menu ကိုနှင့် New တစ်နှစ် 2019 ၏အစည်းအဝေးတစ်ခုဟာအဝါရောင်ကမ္ဘာမြေဟူသည်မှာတွင်ထည့်သွင်း, အရသာလှပ Sitnya မုန်၏တစ်ဦးအမျိုးမျိုးအလွန်လူကြိုက်များ - အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်ကြိုတင်ရှိသူ၏အိမ်တွင်ဧည့်သည်များ, လက်ခံရရှိရန်ပြင်ဆင်နေ, အိမ်ရှင်မပြုစုစောင့်ရှောက် ...
အဆိုပါ Rising Sun က၏မြေများတွင်နှစ်သစ်ကူး: ရိုးရာဓလေ့
ဂျပန်တွင်နှစ်သစ်ကူး: ဂျပန်တွင်နှစ်သစ်ကူးအစဉ်အလာ (။ ဂျပန်အို-sogatsu) - ပု Gregorian ပြက္ခဒိန်မှတဦးတည်းဇန်နဝါရီလအပေါ်ဂုဏ်ပြုသောအရှိဆုံးချစ်သူတို့နှင့်ရောင်စုံပွဲတော်, တထောရှစ်ရာခုနစ်ဆယ်သုံးယောက်တစ်နှစ်, အမေဂျီပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြီးနောက်ငါးနှစ်အတွင်းချမှတ်ခဲ့သေးသည်။ , ထိုမတိုင်မီက ...
ဒိန်ခဲ appetizer "snowman"
ဒိန်ခဲ appetizer "snowman" ဟုပွဲလမ်းသဘင်စားပွဲပေါ်တွင်အရသာရှိတဲ့သရေစာ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှစ်သစ်ကူးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ဆက်လက်လိမ့်မည်! ယနေ့ငါအလွန်အရသာရှိတဲ့ဒိန်ခဲ၏ရေစာမဟုတ်, ကိုယ့်ဒိန်ခဲများအတွက်စာရွက်အများရှိသော်လည်း, ဿုံတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်စွတ်ထားတဲ့ဒိန်ခဲအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကနေ။ နံ့သာမျိုးကို ...
ရိုးရှင်းပြီးအရသာဓာတ်ပုံများနှင့်အတူနှစ်သစ်ကူး 2019 ချက်ပြုတ်နည်းများများအတွက်ချက်ပြုတ်နည်း appetizers
ဘယ်လောက်မြန်ပြိုင်ကားအချိန်ရိုးရှင်းပြီးအရသာဓာတ်ပုံများနှင့်အတူနှစ်သစ်ကူး 2019 ချက်ပြုတ်နည်းများများအတွက်ချက်ပြုတ်နည်း appetizers ။ မကြာသေးမီကဆောင်းဦးရာသီအဲဒီမှာရောက်လေပြီ။ သူမသည်ကျွန်တော်တို့ကိုရောင်စုံစာရွက်နဲ့ဖုံးလွှမ်းမိုးရွာရွာနှင့်ရာသီဥတုဆိုးရွား, သွန်းလောင်းလေ၏။ သို့သော်ပြီးသားလေထုထဲတွင်ဖြည်းဖြည်းချင်းနံနက်အေးစိမ့်သောလွင်လတ်ဆတ်, ပထမဦးဆုံးပေါ်လာဖို့စတင် ...
အဆိုပါ Rising Sun က၏မြေများတွင်နှစ်သစ်ကူး: အကောက်ခွန်နှင့်အစဉ်အလာ
21.12.2018 မှတ်ချက် Leave
ဂျပန်တွင်နှစ်သစ်ကူး: အကောက်ခွန်နှင့်အစဉ်အလာ။ ဂျပန်, ဂျပန်၌နှစ်သစ်ကူးအတွက်နှစ်သစ်ကူးအဖြစ် - အကြိုက်ဆုံးအားလပ်ရက်တဦး။ နှစ်ဆယ်ရှစ်လေးလုံး-ဇန်နဝါရီလမှဒီဇင်ဘာလကနေနောက်ဆုံးမှရသောအားလပ်ရက်, ပြီးနောက်, တိုင်းပြည်အတွင်းအားလုံးနီးပါးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘဝတော့ဘူး။ ...
ဂျပန်, နှစ်သစ်ကူးအတွက်နှစ်သစ်ကူး - အားလုံးနိုင်ငံများနှင့်လူမျိုးများအတွက်အကြီးမားဆုံးအားလပ်ရက်။ ဒါဟာသင်အတိတ်နှစျတှငျဖြစ်ပျက်အောက်မေ့အတိတ်ယခုနှစ်စတော့ရှယ်ယာယူခွင့်ပြုတဲ့အားလပ်ရက်ဖြစ်ပါသည်, သတိရနှင့်ထိုအထဲကသယ်ဝမ်းနည်းစွာအပြန်အလှန်ပျော်ရွှင်ဖြစ်ရပ်များကိုခံစားခြင်းနှင့် ...
appetizer ချက်ပြုတ်နည်းနှစ်သစ်ပြင်ဆင်မှုယူလနျြ၏မျိုးကွဲတွေထဲကပေးထားပါတယ်။ အကြောင်းရုပ်သံလိုင်းကိုပျော်ရွှင်မှုပါ! ချက်ပြုတ်နည်းဟယ်လင် Chekalova သို့သော်မဟုတ်မီးဖိုချောင်၌ရှိသောအိမ်ရှင်မအဲဒီမှာ cocottes, ဒါပေမယ့်မရသာကဖီးသို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှ julienne ကိုစားကြလော့။ အရသာကွတ် ...
ဂျပန်နှစ်သစ်ကူးအစဉ်အလာများနှင့်ရယူထားသောကျနော်တို့အထူးသင်္ကေတဓိပ်ပာယျနှငျ့ Slavic ထုံးတမ်းအဘို့အပုံမှန်မဟုတ်သောပါဝင်သော, ဂျပန်အတွက်နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနား၏အစဉ်အလာအချို့ကိုအကြောင်းကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ ထိုအခါစာရွက်သင်တို့အဘို့ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အံ့သြလောက်အောင်အရသာဂျပန်အစားအစာ, မျှဝေဖို့ ...